Lovyaschie तरङ्ग | यस अनन्त ब्रह्माण्ड
पोस्ट अनन्त स्पेस . अभ्यास . उपकरण . तथ्य
आए वसन्त दुई हजार र नौ. र, निरन्तर उडान, पृष्ठभूमिमा बादल, आकाश को कता नील रंग,दूरी मा प्रकृति र डाइभिङ बन्द को Awakening को reminiscent, आफ्नै तरिकामा मौका बारेमा संकेत अनन्त र धक्का गर्न, उनि भन्छन् गर्न, यो जीवन मा लिन समय थियो सबै.
पहिलो कुरा पहिलो ... म सत्य लुकाउन छैन, म भन्छु: अब तपाईं पुन: सिकाउन छ.
हाम्रो विकास, हामी सबै भन्दा मदत गर्नेछ: prana, शक्ति, कस्मिक ऊर्जा, प्राकृतिक जिउँदो हुनुको.
त्यसैले, कसरी यसको छ?
धेरै सरल! यो स्थिति हासिल गर्न मात्र आवश्यक छ, wherein को महसुस, ऊर्जा शरीर मार्फत बग्छ कसरी.
साँच्चै, यो एक सरल उदाहरण विचार suffices: तपाईँ गर्दा पछि खाना अवशोषित तपाईं यसलाई rastechenie महसुस. फलस्वरूप, खाना को एक सानो रूपान्तरण (ऊर्जा rudely) यो संवाददाता आदर्श मा आफ्नो शरीर को सबै भागहरु वितरण गरिएको छ.
र, नियम, यो अवस्थामा तपाईं जस्ता आफ्नो सहानुभूति शब्दहरू व्यक्त: "राम्रो, अब खुवाउनुभयो ".
हेर्न गाह्रो छैन, खाना कि, शरीर मनमा Assimilation लागि स्वीकार्य गर्न, यो जीव गराउँछ. र तपाईं आफ्नो चेतना को मद्दतले अवस्था सिर्जना, जसमा प्रक्रिया सुरु.
हजारौं को सबै भन्दा साधारण तरिका - को, जो अवशोषण सामाग्री खाद्य. तर किन आफैलाई सीमित र आश्वस्त गर्न, थाहा छैन कसरी केहि?
त्यसैले, बाहेक विश्व यसबारे पनि छ विश्व sensations. र, बस, कारण यस शान्ति, हामी पुग्न satiety को राज्य, पूर्णतामा, संतृप्ति को भावना. र यो मा विश्व सबैभन्दा सहज स्थिति आफूलाई मा sensations
तिनीहरूले, ठूलो भावनात्मक जडान निपटान मा जो: कलाकार, वैज्ञानिकहरू र ती, जो आभा सोने को पानी चढा. यो जस्तै!
हामी टाउको झटका मा लामो पछिल्लो छैन, र समय केही खान हुनेछ
प्राकृतिक जिउँदो हुनुको – जीवंत ऊर्जा, आफ्नै जीवन बाँचिरहेका! अर्थात् उनले यो जीवन को सबै अवस्थित प्रकारका जग र प्रेरक शक्ति हो. वास्तविक कार्यान्वयन ईश्वरीय प्रेम. त्यो निरन्तर आत्म-विकास छ, र तपाईं के गर्न छ सबै - दिन उनको त्यसो गर्न मौका. राम्रो, सामान्य मा, सबैलाई थाह कसरी हामी यसको मनपर्ने. पछि नियालेर. मलाई लाग्छ सबै स्पष्ट छ: ऊर्जा replenishment कारण यो उल्लेखनीय sensations गर्न हुन्छ प्राणीहरू, र अनुमति उहाँलाई तपाईँको व्यवस्थापन बनाउन.
कि यसलाई पर्याप्त - यसको तपाईं बस यस्तो हदसम्म नै पास गर्न आवश्यक, जसमा एक भावना छ संतृप्ति. यसलाई सरल छ ...
यस्तै सिद्धान्त मा भइरहेको र बनाउन-अप अन्य द्वारा छ प्राणीहरू (ऊर्जा प्रकार).
शक्ति - अनन्त समुद्र ठाउँ ईश्वरीय ऊर्जा, यसलाई रचनात्मक र कार्यकारी शक्ति छ अनन्त समुद्र ईश्वरीय चेतना शिव, र एक एकाइ छ.
शिव - सर्वोच्च प्रकारका एक एकल भगवान, हाम्रो अनन्त स्पेस.
ठाउँ ऊर्जा - सिद्धान्त मा, ऊर्जा सबै प्रकारका यो फारम को प्रकटीकरण छ ठूलो ठाउँ ऊर्जा. हामी एक प्रकारको फेला, तपाईंको psycho suiting, हामी आफ्नो भावना हासिल, र यो आफ्नो शरीर मा भित्र पस्नु गरौं. राम्रो कलाकार र बलियो रचनात्मक सुरुमा छ जो सबै को लागि अनुकूल, र रचनात्मकता शक्ति हेर्न सक्षम छ.
prana - जीवनको ऊर्जा, बाट आउँदै प्राकृतिक LIVE प्राणीहरू. पाठ्यक्रम, त्यो अनन्त. जताततै छन्, सबैतिर penetrates. एउटा तरिका यसको हेर्न: हामी बाहिर जाने, चश्मा शूटिंग, perk, हामी आकाशतिर हेर्न, छैन सूर्य, साथै, कि यसलाई कुनै आँखा अन्धो, दूरी मा ध्यान द्वारा 5-10 आँखा बाट सेन्टिमिटर. हामी स्थिति हासिल, wherein नोटिस सुनको "Mote", erratically सार्दा. स्थिर राज्य हासिल - यो भावना सम्झना र यसलाई राख्न. सबै दिन र खुवाउनुभयो गरिनेछ - तपाईं सम्पूर्ण दिन पकड गर्न सक्छन् भने. एउटै खुवाउनुभयो गर्न सकिन्छ, तपाईं यो राज्य सम्झना र यसलाई प्रवेश गर्न सक्छन् भने.
को "खाना" मा छैन ध्यान केन्द्रित गर्न र "जाने छैन" आवश्यकता - तपाईं जैविक खाद्य फेंक हुँदा, र महसुस गर्न, अनुभव तपाईंलाई. हामी उच्च ऊर्जा को एक राज्य मा हुनु आवश्यक छ. यो बहिष्कृत छैन, यी भावना प्राप्त गर्न, तपाईंले केही खान आवश्यक हुनेछ. त्यो म गरिरहेको छु के, र खाना को मात्रा समय कम हुनेछ.
निम्न अध्याय थप विवरण - लागि सुरु पर्याप्त हुनेछ.
यो वसन्त यो एक ठूलो मात्रा को रिलीज हुनेछ कस्मिक ऊर्जा, र यदि तपाईं ताली छैन यसको र साथ प्रवेश गर्न सक्षम हुनेछ यसलाई अनुनाद मा -
को लहर मा हुनेछ, जो संक्रमण को सबै जटिल nuances मार्फत पूरा गर्नेछ, ताकि, lovyaschie लहर, भेट्नुहोस् वसन्त
छालहरू... ठाउँ घोषणा वसन्त...
... हाँ ... र म, सायद, धेरै पम्प्ड ...
... र ध्वनि, प्रत्येक अन्य संग intertwined, आफ्नै accords को सौन्दर्य मा स्थिर, यदि प्रशंसा अमेरिका प्रकट, नयाँ संगीत को जन्म अघिबाटै जान्ने काम मा ...
जो थियो समय - र उहाँले खाए. ))
टिप्पणीहरू (4)
यस मामला मा हामी साधारण मानव आँखा बारेमा कुरा गर्दै छन्.
हिज्जे … को…!
व्यायाम उपकरण. आफैलाई हेर्न. पराउँछु एक ;)